‘ज्यानको वाजी राखेर खोला कति दिन तर्नु ?’
प्यूठान, स्वर्गद्वारी नगरपालिका–८ खैरेनी स्थित दंगल खोलामा स्थानीय दल बहादुर के.सी.को मोटर साइकल बग्यो । यस बर्ष पनि सोही गाउँका याम बहादुर बस्नेत पनि मोटरसाइकल बगाएपछि लाखौको मोटरसाइकल गुमाउनु परेको छ । यति मात्रै होइन प्रत्येक बर्षमा जोखिमपूर्ण यात्रा गर्न बाध्य हुनु परेको छ ।
मोटरसाइकलको यात्रा नगरी नहुने तर खोलामा पानीको बहाव बढी भएर मोटरसाइकल तार्न समस्या भइरहँदा पनि समस्या समाधान नहुँदा यहाँका वडाबासी चिन्तित छन् । अर्को गाउँमा स्वास्थ्य चौकीका स्वास्थ्यकर्मी रहेका याम बहादुर बस्नेतको खोलाले बगाएको बाइक सिज हुँदा लाखौको क्षति भएको बताए । “कार्यालयमा जान मोटरसाइकल प्रयोग नगर्दा पुग्न समस्या हुने गर्दा खोला तार्न नसकिदा समस्या भएको छ” उनले भने“ज्यानको बाजी थापेर कति दिन खोला तर्नु ? कष्ठ भएको छ ।”
गाउँलाई जोड्न तत्कानि गाउँ विकास समिति र जिल्ला विकास समितिको कार्यालय खलंगामा पक्की पुल बनाउने सम्झौता, राजनितिक दलको आश्वासन मात्रै स्थानीयले पाए । तर अधिकार सहितको स्थानीय सरकार आउँदा पनि समस्या समाधान हुन नसकेको स्थानीय आनन्द थापाले गुनासो गरे । “नगरपालिकाको केन्द्र तर्फ जान ज्यानकै वाजी थापेर हिड्नु पर्ने बाध्यता छ ” थापाले भने “तर समाधानको उपाय खोजिदिने निकायले जनताको पीडा बुझिदिएन ।”
मान्छे तर्न फड्केको भर
खोलामा पुन नहँुदा मान्छेलाई समेत आवतजावतमा समस्या भएको छ । बालबालिकाहरुलाई आवतजावतका लागि काठको पुल बनाइ हिड्ने गरेका छन् । स्थानीय आनन्द थापा, रमेश रोका, पदम रोका लगायतका यूवाहरुले काठको फड्के बनाइ वारपार गर्ने गरेका छन् । वर्तमान विज्ञान र प्रविधिको युग र स्थानीय सरकार गाउँ गाउमा आएको भनेर प्रचार गरिए पनि जिम्मेवार जनप्रतिनीधि र निकायहरुको उपेक्षाका कारण समस्या ज्युका त्युँ हुन पुगेको स्थानीयको भनाई छ ।
अपरिपक्क नेपाली राजनीति र जेठ ३
२०७८, जेठ ०४
अपरिपक्क नेपाली राजनीति र जेठ ३ यज्ञ बहादुर के.सी.( प्रभात) जब मदन अश्रित मृत्युु भयो, ने.क.प.एमालेले उक्त मृत्यु लाई अस्वबाभिक षड्यन्त्र पुर्ण हत्याको आशंका गरि तत्काल दाेषी पत्ता लगाई कडा कार्बाहिको माग गर्यो । तत्कालीन नेपाली कांग्रेस...
प्यूठान जिल्लाको मल्लरानी गाउँपालिका वडा न.१ ठुलाचौर प्यूठानमा टोल सुधार समितिको गठन गरिएको छ।